Nagu Saabsan - QUANZHOU HOPE SHOE Co., Ltd.
Waxaan wax u qabanaa waxoogaa kala duwan, taasina waa habka aan u jecel nahay!
Waxaa la asaasay 2010, shirkadeena waa soo saare kabo xirfadeed. Shirkadeena waxay ku taalaa magaalada Quanzhou, gobolka Fujian. Halkan waxaan ka bixinaa R&D, Waxsoosaar, Saadka, Iibsashada iyo howlaha nashaadaadka Amarka. Waxaan leenahay koox iibiya xirfadleyaal si ay u bixiyaan adeeg buuxa oo la yaab leh, oo awood kuu siinaya inaad abuurto naqshad kasta oo aad rabto oo aad soo saarto kabo aad rabto.
Soosaarida Awoodda: 2.5-3 milyan oo labo-labo kabo ah sanadkii
Soo-saarkii sannadlaha ah: in ka badan $ 20 milyan oo joogto ah ayuu kor ugu kacaa
Lambar Lines Production: 3
Suuqyada Ugu Waa Weyn: Waqooyiga Ameerika, Yurub, Koonfurta Ameerika, Japan
Alaabada ugu waaweeyn: Kabaha isboortiga, kabaha caadiga ah, kabaha bannaanka iyo kabaha.
Macaamiisha Muhiimka ah: Skechers, Diadora, Gola, Kappa, iwm.
Waxaan sameyne kabo taas macaamiisha rabitaan. Waxaan ognahay suuqa, inaan raacno horumarka si dhow oo aan awoodno inaan wax uga qabanno isbeddelada cusub si dhakhso leh.
Kabaha kasta wuxuu ka bilowdaa guddiga sawirka naqshadeeyayaasha. Naqshadeynta iyo muunad la xiriirta ayaa markaa la soo bandhigi doonaa. Waxsoosaarku wuxuu bilaabmayaa marwalbo faahfaahinta oo dhan ay buuxiyaan shuruudaha macmiilka. Macaamiil badan ayaa horay u soo saaray sumadaha ay iyagu leeyihiin sidan. Ma jeclaan laheyd inaad raacdo talaabooyinkooda?
Kabahayada ayaa loo Sameeyay Macaashkaaga
Adigoo ku biiraya xoogaga, waxaad leedahay lamaane kaa caawin kara inaad ku guuleysato soo laabasho sare ee iibka kabaha. Tusaale ahaan, shirkadaha warshadaha moodada ee aan wali kabo ku haynin heerarkooda, laakiin kuwaas oo gartay fursad. Waxay noo soo dhowaadeen talo iyo macluumaad si aan uga helno aragti ku saabsan xulashooyinka, iyaga oo u oggolaanaya inay u galaan adduunkan cusub ee kabaha sifiican loo diyaariyey. Khibradeena - marar badan, talaabooyinkaas taxaddarka leh ee ugu horreeyay waxay ku soo baxeen xiriir ganacsi muddo-dheer oo ku saleysan is aaminaadda, khibradda iyo dabacsanaanta.
Lahaanshaha 10 Sanno Oo Khibrad Leh Ganacsiga Kabaha iyo Warshadaha
Waxaan soo saarnay oo aan dhoofinay kabaha illaa sanadkii2010. Ilaa iyo markaas, malaayiin lammaane ayaa helay habkooda ragga, haweenka iyo carruurta adduunka oo dhan. Waxaan kabo u samaynaa qaab kasta, midab iyo nashqadeyn ay macaamiisheenna doonayaan. Alaabooyinkeennu waa kuwo jawi saaxiibtinimo leh waxayna u hoggaansami karaan REACH, CISIA iyo macaamiishooyinka kale ee imtixaannada la dalbado.